TP-Link 841 राउटर: समीक्षाहरू, ट्यूनिंग
नेटवर्क उपकरण बजारमा, एक रोचक राउटर मोडेल हो जुन ध्यान आकर्षित गर्दछ - TP-Link 841। तथ्य यो छ कि राउटर दुई परिमार्जनहरू छन् जुन विभिन्न मूल्य खण्डहरूमा छन्। यस लेख मा पाठक एक नै मार्किंग को दुई डिवाइस संग परिचित हो जाएगा। सुविधाहरूको वर्णन, अनुकूलन को आसानी र मालिकहरूको प्रतिक्रियाले तपाईंलाई घर प्रयोगको लागि एक सभ्य नेटवर्क उपकरण चयन गर्न अनुमति दिन्छ।
बजेट वर्गको प्रतिनिधि
एनपी लेबलको साथ TP-Link 841 राउटरलाई महँगा खण्डको पहिलो प्रतिनिधि भनिन्छ। तथ्य यो हो कि यसको लागत (1200 - 1500 rubles) यो उपकरण नेटवर्क उपकरण को प्रारंभिक खंड मा स्थित गर्दछ, र कार्यात्मक व्यापार वर्ग मा उपस्थित प्रदान गर्दछ।
दोहोरो मोडको अपरेशन: पहुँच बिन्दु र राउटर। सच्याउँदा सेटिङहरू सुरक्षित भएन र तिनीहरू पुन: इन्टरनेटको आवश्यकता पर्दछ (यो रूटिंगको बारेमा)।
Wi-Fi 802.11bgn को सबै अवस्थित मानकहरूको लागि समर्थन। वायरलेस संचार भित्र अधिकतम गति 300 MB / s छ, तर अभ्यासमा यो आंकडा2पटक कम हुन्छ।
सबै बजेट उपकरणहरूको लागि मानक 4-पोर्ट स्विच, WPS र दुई एन्टेना संकेत प्रवर्धनका लागि पनि उपलब्ध छन्।
सस्ती उपकरण जान्न
एक ठूलो सेतो बक्स धेरै जानकारीपूर्ण छ: TP-Link 841 राउटरका विशेषताहरू र रङ छविको विवरण हो । रूटर जडान गर्ने तरिकाले तपाईंलाई किटसँग विस्तृत निर्देशनहरू बताउनेछ। साथै बक्समा, प्रयोगकर्ताले पावर सप्लाई, सफ्टवेयर डिस्क, प्याच शब्दहरू र विज्ञापन सामग्रीको धेरै रंगीन ब्रोशरहरू पाउनेछन्।
सम्बद्ध र इन्टरनेटमा जडान गर्न संचारमा विशेष ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन - राउटर प्यानलमा सबै तत्वहरू रंग फरक फरक छन् जुन मालिकसँग कार्यको सामना गर्न मद्दत गर्दछ। केवल ठुलो प्रणाली - ईन्टरनेटले मात्र उपकरणको तल्लो तहमा निलम्बन होईन। सानो रबडयुक्त खुट्टाहरू आन्तरिक घटकहरू पर्याप्त रूपमा शांत गर्न अनुमति दिँदैन, त्यसैले लामो समयसम्म सञ्चालनको कारण राउटर हट्न सक्छ।
एक बजेट उपकरण सेट अप र प्रबन्ध गर्दै
सञ्चालन प्यानल इन्टरफेस जस्तै, नियन्त्रण प्यानल इन्टरफेसको रूपमा, रसिफ गरिएको छ, त्यसैले मालिकले TP-Link 841 राउटर सजिलै कन्फिगर गर्न सक्दछ। तथापि, प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको प्रतिक्रियामा बिन्दुमा देखाउँछन्, मेनु धेरै ठूलो छ - त्यहाँ धेरै वस्तुहरू जसको कार्यक्षमता अस्पष्ट छ भने हातमा निर्देशन संग पनि। वास्तवमा, निर्माताले व्यापार यन्त्रहरूसँग एक इन्टरफेस स्थापना गरेको छ, न केवल घर प्रयोगकर्ताहरूमा मात्र, तर साना व्यवसायहरूमा पनि फोकस।
जब तपाईं पहिलो नियन्त्रण प्यानलमा लग इन गर्नुहुन्छ, सहायक पनि देखा पर्दैन। तपाईंले "द्रुत सेटअप" मेनुको माध्यमबाट यसलाई चलाउन आवश्यक छ। कन्फिगरेसनमा केहि जटिल छ:
यदि रेखा चयन गरिएको छ भने, त्यसपछि राउटरले मार्ग मार्ग प्रदर्शन गर्छ, अन्यथा, यसले सञ्जाल कन्फिगरेसनको लागि परिमितिसँग सञ्झ्याल प्रदर्शन गर्दछ (VPN, PPPoE र मनपराउने);
"ताररहित सञ्जाल" मेनुले Wi-Fi सञ्जाल सिर्जना गर्न प्रस्ताव गर्दछ (उदाहरणका लागि, प्रयोगकर्ताको गाइड सेटिङको एक उदाहरण हो);
अतिरिक्त प्यारामिटरहरू TP-Link 841 मालिकले पहिले नै आफैं स्थापना गर्दछ (फायरवाल, पोर्ट फर्वार्डिंग, डिस्प्लेरेक्टेड क्षेत्र र यस्तै सेटिङहरू)।
TP-Link 841 ND राउटरको अजीब सुविधाहरू
जडान सिर्जना गरेपछि एक ताररहित सञ्जाल र आवश्यक प्यारामिटरहरू निर्दिष्ट गर्दै, राउटर सेटिङहरू बचत गर्न रिबुट आवश्यक पर्दछ। यस चरणमा, र निर्माताको दोष देखाउँदछ - राउटर अचानक अन्वेषण गर्दछ कि आधिकारिक साइटमा TP-Link 841 को लागि नयाँ फर्मवेयर छ। स्वाभाविक रूपले, प्रयोगकर्ताले अद्यावधिक सफ्टवेयर डाउनलोड र स्थापना गर्नै पर्छ। सबै सेटिङहरू अधिलेखन छन्, र मालिकले राउटरको प्यारामिटर पुन: लेख्नु पर्छ।
अर्को नकारात्मक छ कि प्रयोगकर्ताले सामना गर्नुपर्नेछ वा वायरलेस च्यानल मार्फत भिडियो वा ट्राभरेन्स स्ट्रिमिङ गर्दा उपकरणको ह्याङ्ग हो। यो राउटरको आन्तरिक अवयवको ओभरहेटिङको कारण हो। समस्या उपकरणको आवासमा ठुलो प्रणाली स्थापना गरेर हल गरिएको छ। यसको समीक्षा मा धेरै मालिकों यस प्रयोग को लागि सिफारिश ले ल्याप्टप उड़ाने को लागि सस्ती स्टैंड।
एक महंगे खण्डको प्रतिनिधि
तर व्यापार वर्ग राउटर प्रयोगकर्ताहरूको लागि चासो हुनेछ जुन एक पटक यन्त्र कन्फिगर गर्न र फेरि पनि यो मुद्दामा फिर्ता फर्कन चाहानुहुन्छ। उन्नत टीपी लिङ्क राउटरमा, मीडियामा 841 समीक्षाहरू मात्र योग्यताको वर्णन गर्दछ। सबै आवश्यक टेक्नोलोजी विशेषताहरू (Wi-Fi मानकहरू, गति, कन्फिगरेसनको समान र समान कार्यक्षमताको लागि समर्थन) को अलावा, राउटरले कर्पोरेट खण्ड व्यवस्थापन गर्न क्षमता प्रदान गर्दछ।
सबैभन्दा पहिला, हामी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं - तपाइँ प्रत्येक जडित यन्त्रको लागि प्राथमिकताहरू ब्लक गर्न वा इन्टरनेट प्रशासकको लागि म्याकको ठेगाना वा दायरा, सेवा च्यानल सिर्जना गर्नुहोस् र अधिक रोचक द्वारा इन्टरनेटमा पहुँच रोक्न सक्नुहुन्छ।
एक वास्तविक राउटर
उपकरणको मानक उपकरण खरिद गर्न कृपया सम्भव छैन, बाहेक राउटरको उपस्थिति ध्यान आकर्षित गर्दछ। हातमा TP-Link 841 HP राउटर लिँदै, मालिकले तुरुन्तै बुझ्न पाउनेछ कि यो केवल उनको सामने अर्को प्लास्टिकको खिलौना छैन, तर वास्तविक सञ्जाल उपकरण (यो पनि एक ठूलो वजन पनि यसले संकेत गर्दछ)। मालिकले प्रवर्धन एन्टेनालाई पनि मन पराउछ - तिनीहरूले वास्तवमा एक गुणवत्ता सिग्नलको ट्राफिक वृद्धि गर्छन, र अर्को प्रोप्स होइनन् (Wi-Fi सिग्नल सजिलै संग धेरै कंक्रीट पर्खालहरु लाई बिच्छेदन गर्दछ - यो एक योग्य संकेत हो)।
मैले निर्माता र ठुलो समस्याको साथ समाधान गरे - शरीर सबै पक्षबाट पूर्ण रूपमा उडेको छ। उनीहरूको समीक्षामा धेरै मालिकहरूले यो दावा गर्छन् कि TP-Link 841 (2 -3वर्ष) को लामो प्रयोगको साथ, यन्त्र कहिल्यै दुर्घटनाग्रस्त भएको छैन। कैबिनेटमा उभिएर राउटरको बलियो धुवाँले पूर्ण-विशेष रुपले कामको साथ हस्तक्षेप गर्दैन।
उन्नत राउटर सेट अप गर्ने विशेषताहरू
राउटरको जडान र व्यवस्थापनको साथ, मालिकहरूसँग समस्या छैन। के त्यो केही प्रयोगकर्ताहरू अंग्रेजी इन्टरफेस मनपर्दैन। यो शर्मिला छ कि4-5हजार रूबल खर्च गर्ने यन्त्र भाषा प्याकसँग प्रदान गरिएको छैन। वैसे, स्थिति फर्मवेयर तय गर्न सक्छ, जो निर्माता को आधिकारिक वेबसाइट बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
औसत मालिकको लागि, जो उनको आवश्यकताको लागि TP-Link 841 राउटर पछि हेर्छ, सेटअप गाह्रो हुने छैन। त्यहाँ एक सहायक हो जुन तपाइँ सेटअप मेनु प्रविष्ट गर्दा चलाउनुहुन्छ, त्यहाँ रूसी भाषामा एक कदम-दर-चरण निर्देशन हो, किटमा आपूर्ति गरिएको छ। अन्तिम प्रयोगकर्ताको सुविधाको लागि सबै कुरा
एक महंगा प्रतिनिधिको हानि
र यो मौका छैन कि TP-Link 841 राउटर व्यवसाय वर्गको खण्डमा राखिएको छ। स्थानीय र ताररहित नेटवर्कमा सुरक्षा कन्फिगर गर्नुहोस् नेटवर्क उपकरणको बजारमा यसको मुख्य मापदण्ड हो। यो कार्यक्षमता सीमित गर्न, निर्माताले साधारण प्रयोगकर्ताहरू बिर्सनुभयो। राउटरमा कुनै USB पोर्ट छैन। तदनुसार, राउटरसँग जडान गर्न प्रिन्टर, न त फ्लैश ड्राइव, न त हार्ड ड्राइभ। यो एक गम्भीर दोष हो, जसले ग्राहकहरूको घाटा TP-Link को लागतमा लिन सक्छ।
सिग्नलको प्रवर्धनमा अजनबीहरू छन्। धेरै रोचक कुरा, निर्माताले पावर सेटिङ्लाई बुझ्यो। उदाहरणका लागि, "US" स्थान स्थापना गर्दा यो देशको लागि फर्मवेयर डाउनलोड गर्दा Wi-Fi सिग्नल दोहोर्याइएको छ (धेरै स्वतन्त्र आईटी विशेषज्ञहरूले यो तथ्य पुष्टि गर्छन्)। के रूसी भाषी जनसंख्या अमेरिकियों भन्दा खराब छ?
पुनरावलोकनको नतीजाको रूपमा, यो दुई चिन्हमा फरक फरक मार्गमा निष्कर्ष निकाल्न जारी राख्छ। TP-Link 841 बजेट प्रतिनिधि ग्राहकहरूलाई अहिल्यै खरिद गर्न रुचि हुनेछ, जसको लागि उपकरणको लागत प्राथमिकतामा छ। एक सस्तो राउटर खरिद गर्दा प्रयोगकर्ता सस्तो खण्डको एक प्रतिनिधिको चारैतिर "टिम्बरोइनसँग नाच" गर्न सहमत हुनुहुन्छ (यो ह्याङ्ग-अप बारेमा छ)।
व्यापार वर्ग राउटरले केहि फाइदाहरू प्रदान गर्दछ - उच्च स्थिरता, धेरै सेटिङहरू, सभ्य सुरक्षा। तर फेरि, गृह प्रयोगकर्ताको लागि, परम्परागत USB इन्टरफेसको कमीले सबै सुविधालाई नकारात्मक बनाउँछ। कुनै पनि अवस्थामा, खरिदले उनको लागि अझ महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दछ: विश्वसनीयता वा कार्यक्षमता, किनभने सुनको अर्थ टीपी-लिङ्कको निर्माता द्वारा प्रदान गरिएको छैन।
मुद्रक कसरी सेट अप गर्ने?
"जडान गरिएको USB उपकरणहरू मध्ये एक ठीक तरिकाले काम गरिरहेको छैन" - यो के मतलब छ र समस्या कसरी हल गर्ने हो?
निकल क्यामेडियम ब्याटरहरू के हुन्
Wi-Fi सिग्नल इन-हाउस बढाउनुहोस्
सबै चलचित्रहरू Lui डी Funes। "Fantomas", "Razin" र अन्य रोचक तस्वीर
व्यक्तिगत चेतना: अवधारणा, प्रकृति, विशेषताहरु। कसरी सम्वन्धि सामाजिक र व्यक्तिगत चेतना?
अभिनेता माइकल जे फक्स :. Filmography, जीवनी र सफलता को इतिहास
काजल "Leningrad": विवरण र फोटो
यस बैंकको सम्पत्ति र व्यावसायिक बैंकहरू को सक्रिय सञ्चालन
नयाँ वर्ष मनाउन एक रोचक तरिका